Horudhac: West Ham United vs Liverpool… (Reds oo doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka marka ay booqanayso caawa garoonka London) – Gool FM
(London) 29 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Liverpool oo barbaro 2-2 la soo gashay kulankii FA Cup-ka naadiga Shrewsbury Town ayaa caawa booqanaysa London Stadium, halkaasoo kulan ka tirsan horyaalka Premier League ay kula soo ciyaari doonto West Ham United.
Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jurgen Klopp ayaa doonaysa inay sii wadato guulahaeeda xiriirka ah marka ay booqanayaan caawa naadiga West Ham oo ka mid ah afarta kooxood ee ugu hooseeya horyaalka.
Taariikhda: Arbaco, 29 Jan 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 10:45 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garooraha: Jonathan Moss (England)
Goolhayaha West Ham ee Lukasz Fabianski ayaa xaaladdiisa la qiimeyn doonaa, kaasoo ku dhow inuu dib uga soo laabto dhaawac bowdada ah.
The Hammers kooxda lagu naanayso ayaa sidoo kale qiimeyn doonta ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee Robert Snodgrass, kaasoo u dagaalamaya inuu ka guuleysto dhaawac jilibka ah.
Ryan Fredericks, Felipe Anderson, Andriy Yarmolenko, Arthur Masuaku iyo Jack Wilshere ayaa dhammaantood weli garoomada maqan.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp kaasoo 11 isbedel ku sameeyey shaxdiisa kulankii ay barbaraha la galeen Shrewsbury ee FA Cup-ka ayaa soo kicin doona kulankaan xiddigihiisa waa weyn ee safka hore.
Weeraryahanka Reds ee Sadio Mane ayaa dhaawac muruqa ah la maqnaan doona, waxaana hubaal ah inuu seegayo kulankan.
>- West Ham ayaa guul la’aan ah lix kulan oo Premier League ay ku wajahday Liverpool, waxaana ay kala kulantay 2 Barbaro iyo 4 Guuldarro, tan iyo markii ay guul 2-0 ka gaareen bishii Janaayo sanadkii 2016 markaasoo uu kooxda reer London watay macallin Slaven Bilic.
>- Liverpool ayaa laga badiyey labadii kulan ee ugu horreeyey oo ay marti ahaayeen oo ay ku wada ciyaareen Upton Park, halkaasoo ay ku wajaheen West Ham iyagoo ka hoos ciyaaraya Jürgen Klopp tartammada oo dhan, laakiin waxa ay guuleysteen labo ka mid ah saddexdii kulan ee ugu dambeeyey, iyagoo kulanka kalena barbaro galay dhammaan kulammadaas ayaana ka dhacay garoonka London Stadium.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 21-keedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay ciyaartay Arbaco caawa oo kale waxaana ay guuleysatay 15 ka mid ah kulamadaas halka 6 kale ay barbaro gashay tan iyo markii ay khasaaro 1-3 guuldarro kala kulmeen Stoke City bishii December 2012-kii.
>- Macallin Jürgen Klopp ayaa maamulay 14 kulan maalintaan oo kale welina wax khasaaro ah ma soo gaarin isagoo 9 kulan guuleystay, halka uu barbaro haysto shan kulan, waana in ka badan macallin kasta oo kale taariikhda horyaalka Preier League ee maalin gaar ah aan la garaacin.
>- West Ham laacibkeeda khadka dhexe ee Mark Noble ayaa dhaliyey saddex gool afar kulan oo Premier League uu ka soo muuqday David Moyes hoostiisa xilli ciyaareedkan, intii lagu guda jiray markiisii ugu horreeyey ee ninkaan reer Scottish uu kooxda hoggaankeeda hayey 2017-18, Noble waxa uu dhaliyey kaliya afar gool 22 kulan oo uu ciyaaray.
>- Liverpool ayaa labo goo loo ay ku hormartay laga daba keenay oo laga dhigay barbaro 2-2 waxaana sidaas sameysay kooxda Shrewsbury Town wareegga afaraad ee FA Cup-ka Axaddii, Reds ayaan guul la’aan ahaanin labo kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan tan iyo bishii Febraayo sanadkii 2019, markaasoo ay barbaro la galeen Kooxaha Bayern Munich iyo Manchester United.